Iyo diki horo inzvimbo yakazara yakati sandara ine nhanho yekusimudza inosvika makumi mashanu emasendimita pakureba.
Kune zvigaro 175 zvemacheya chete uye zvigaro zve108 zvechikoro maitiro kana uchishandisa nhanho, iyo inogona kushandiswa kumakonzati, mharidzo dzakasiyana, hurukuro, nezvimwe.
Nyika iyo nhanho inosimudzwa ne50 cm
Zvigaro zvevateereri hazvina kugadziriswa.Izvo zvinokwanisika kuronga zvigaro (zvinosvika pazvigaro zana nemakumi manomwe nezvishanu) uye wozvishandisa nedhesiki refu.
Nekuda kwechimiro cheichi chivakwa, madhiramu eJapan haakwanise kushandiswa.
Iwe haugone kutamba kana kutamba kunze kwepachikuva.
Iwe haugone kudya kana kunwa kana uchishandisa nhanho yekusimudzira.
Sezvo pasina nzvimbo yekuratidzira yemapaneru, hazvigoneke kuratidza kumadziro.
Kana iwe uchida kushandisa iyo yekuratidzira kamuri uye diki horo pamwe chete, iwe unofanirwa kukwereta imwechete chikamu pazuva rimwe chete.Uye zvakare, iwe haugone kuridza zviridzwa zvemimhanzi kana karaoke nekuti iyo yekudzivirira inzwi inorasika.
Zvezvigaro chete: Kusvikira 175 zvigaro
Paunenge uchishandisa tafura uye chigaro: zvigaro 108 (kana usiri kukwidza danho rekusimudzira: zvigaro zana nemakumi maviri)
Nzvimbo: 170 mativi emamita
Kudzika: 17m, Kukwirira kwedenga: 4.5m
Kukwidza nhanho (upamhi 9.9m x kudzika 4.7m x kukwirira 0-50cm)
Chiedza baton 6, art baton 1, keteni 3
Screen (ichitenderera mhando) Zvikwiriso zvakakwirira: 3.15m x 5.85m
60ch 3 nhanho chiuru chezviitiko ndangariro
20 submasters x 6 mapeji
10 submaster fader (pamberi pemba)
Dimming dunhu Chikamu (3kW x 78 maseketi)
Midziyo yemwenje yakaiswa Kuturika mwenje 1 mutsara
Border mwenje (LED) 1 mutsara
3 mitsara yemwenje yedenga
Chiedza cheHorizont (kumusoro, pasi, LED)
1 2kw xenon pini mavara (opareta anodikanwa kuti ushandise)
Tafura yekugadzirisa inzwi
(RAMSA C-900) Kuisa: Monaural 20ch + Stereo 4ch
Kubuda: 4 mapoka 4AUX
Mudzidzisi LR Matrix x 16
Mutauri Mutauri mukuru: NEXO PS15V (kubhururuka)
Kuisa chisimbiso: TANNOY CMS 503DCLP
Signboard furemu (Yakabatanidzwa pamusoro: kureba 84 cm x upamhi 30 cm)
Ndokumbirawo mugadzire pachine nguva sezvo ichigovaniswa neimba yekuratidzira.
Firiji, chando muchina, nezvimwe.
Mashoko pamusoro pekutakura-mukati (yadhi yebasa)
* Sezvo ichigovaniswa pamwe nezvimwe zvivakwa, haigone kuvharirwa mushure mekunge yaendeswa mukati kana kunze.
* Ndokumbirawo upinde kubva kune yekupaka nzvimbo yekupaka padivi pehofisi kuseri kweAplico.
Kureba muganho: 2.8m
Diki Horo: Musangano Wehurukuro
Horo diki: Chigadzirwa kutengesa
Horo diki: Exhibition
Zuva rese shandisa chete 14,000 / 14,000
Imba yekumirira 1
Imba yekumirira 2
Zuva rese shandisa chete 16,800 / 16,800
Dhirowa yose yekudhirowa uye mashandisiro maitiro (semuenzaniso)
Wese maonero eiyo diki horo
Nezve iyo yekumirira imba
Kune makamuri maviri ekumirira anokwana vanhu vana muhoro diki.
Kuti uwane mamwe mashokoRuzivo pane horo diki yekumirira Ndokumbira utarise kune iyo.
Kurongeka kwedanho, imba yekumirira, nezvimwe.
Kana iwe uchida kuona kuti inotaridzika sei, ndapota tinya pamufananidzo.
Dzvanya icon kuti uione mune panoramic maonero.